Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Manomboka ny sidina mankany Luanda ny Emirates manomboka amin'ny 1 Oktobra
Emirates'Hivelatra amin'ny toerana 15 ny tamba-jotra afrikanina miaraka amin'ny fanombohana an'i Luanda, Angola manomboka amin'ny 1 Oktobra. Ny zotram-piaramanidina dia manohy mamerina miverina tsikelikely sy milamina ny tamba-jotra, manatanteraka ny fampanantenany momba ny fahasalamana sy fiarovana rehefa mamaly ny fitomboan'ny fangatahan'ny mpandeha manerana an'izao tontolo izao.
Ny sidina mankany Luanda dia hiasa indray mandeha isan-kerinandro amin'ny alakamisy. Ny sidina Emirates EK793 dia handao an'i Dubai amin'ny 0945hrs, tonga ao Luanda amin'ny 1430hrs. EK794 dia handao an'i Luanda amin'ny 1825hrs, ary tonga any Dubai amin'ny 0510hrs ny ampitso. Ny tapakila dia azo alefa ao amin'ny emirates.com, ny Emirates App, biraon'ny fivarotana Emirates, amin'ny alàlan'ny agents agents ary koa ny agents travel online.
Afaka mijanona na mandeha any Dubai ny mpanjifa satria nosokafana indray ny tanàna ho an'ny mpitsidika iraisam-pirenena sy mpitsidika fialamboly. Fiantohana ny fiarovana ny mpandeha, ny mpitsidika ary ny fiarahamonina, Covid-19 Ny fitsapana PCR dia tsy maintsy atao ho an'ny mpandeha miditra sy mpandeha rehetra tonga any Dubai (sy ny Emira Arabo Mitambatra), ao anatin'izany ny olom-pirenena UAE, mponina ary mpizahatany, na aiza na aiza firenena niaviany.
COVID-19 PCR fanandramana: Ireo mpanjifan'ny Emirates izay mila mari-pankasitrahana COVID-19 PCR alohan'ny fiaingany any Dubai, dia afaka mahazo fihenam-bidy manokana ao amin'ny Hopitaly Amerikanina sy ny tobim-pitsaboana satelita manerana an'i Dubai amin'ny alàlan'ny fanolorana ny tapakilan'izy ireo na ny pasiterany fotsiny. Misy ihany koa ny fitsapana trano na birao, ary 48 ora ny valiny.
Symposium ho an'ny tanora PATA 2020: manome hery ny tanora amin'ny ho avy